RW Kheyre oo qaabilay qaar ka mid ah dhalinyarada Magaalada Kismaayo + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka RW Kheyre oo qaabilay qaar ka mid ah dhalinyarada Magaalada Kismaayo +...
RW Kheyre oo qaabilay qaar ka mid ah dhalinyarada Magaalada Kismaayo + Sawirro
(Kismaayo) 13 Maarso 2019 – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ayaa magaalada Kismaayo kulan xog-waysi ah kula yeeshay dhallinyarada ku nool magaalada.
Previous articleWarbixin ka hadlaysa tirada dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee la dilay sanadkaan oo kaliya. Yaa fuliyay howlgallada?
Next article”Waxaad tahay eey, dameer & addoon madoow!” – Diblomaasi Qadari ah oo si qaab daran muddo dheer ula dhaqmay oday Soomaaliyeed